မန်နေဂျာ ဆီဖုန်းတွေ ဆက်ပြီး အတွင်းရေးကို စပ်စုတဲ့ သူတွေကို နာမည်တွေရွတ်ပြီး Live လွှင့်ပြောပြစ်မယ်လို့ ဒဲ့ပြောလာတဲ့ဇာဇာထက် – Shwe Sar
မန်နေဂျာ ဆီဖုန်းတွေ ဆက်ပြီး အတွင်းရေးကို စပ်စုတဲ့ သူတွေကို နာမည်တွေရွတ်ပြီး Live လွှင့်ပြောပြစ်မယ်လို့ ဒဲ့ပြောလာတဲ့ဇာဇာထက်
လူတိုင်းနီးပါးမှာလူမသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့ရှိနေစမြဲပါ။ ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်လှန် ထောင်းမယ့်အဖြစ်မျိုးတော့ ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။ ဇာဇာထက်မှာလည်း သူမရဲ့ အတွင်းေ ရး ကိ စ္စတစ်ချို့ကို ပရိသတ်တွေကိုသိသင့်သလောက် သိခွင့်ပေးထားခဲ့ပြီး ထိန်ချန် ထားတာတွေရှိကြောင်းလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ ဒါကိုမှ စည်းမရှိဘဲ အတင်း စပ်စုနေသူတွေ ကြောင့် စိတ် ရှုပ်ခဲ့ ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ” I don’t like curiosity ok? ကိုယ်ချင်း စာဖို့ထက် နောက်ထပ်စပ်စုချင်သူများလဲ ကျွန်မရေးတဲ့ ဒီစာလေးကိုမြင်ကြ ပါစေ Social ကျပြီး အရမ်း atti t ude ဖြစ်တဲ့သူတွေကလဲနော် ကျွန်မအတွင်းရေးစပ်စုတာ ကျွန်မဖုန်းကို မန်နေဂျာက မဇာ personalမို့ မသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ ဖြေတာကို သူ့သူငယ်ချင်းပါ တရားစွဲတာဘယ်သူလဲသိချင်လို့ သူ့ ကိုလှ မ်းမေးတာပါပြောပြီး မန်နေဂျာကိုတောင် စိတ်ဆိုးသွားလေသတဲ့ကွယ် ပြီးတော့ကျွန်မကိုပါ ဖေ့စဘွတ်ကပါ သူတို့တွေကအန်ဖရန့်လုပ်သွားတာကိုယ်ကသိတောင်မသိဘူး ”
ကိုယ့်မန်နေဂျာပြောမှကိုယ်သူတို့နာမည်တွေရိုက်ရှာကြည့်တော့ဖရန့် မဟုတ်တော့ဘူး ရယ်ရတယ် educated ဖြစ်ပြီး social ကျတဲ့သူမျိုးဆို ပိုတောင် ethic ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား? စိတ် ဆိုးရုံမကလို့လဲပါသေသေ ဒါမျိုးမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ကျွန်မ မလွမ်းပါဘူးရှင့် ကျွန်မ မန်နေဂျာခန့်ထားတာ ရှင်တို့အားတိုင်း ဖုန်းခေါ်စပ်စုဖို့ထားတာ မဟုတ်ဘူး အလု ပ်အတွက်သီးသန့် ထားထားတာ ပအို့ဝ်းမနော် သဘောကောင်းတယ်နော် စိတ်ဆိုးအောင်လာမလုပ်ကြနဲ့ နာမည်တွေရွတ်ပြီး Live လွှင့်ဒဲ့ပြောပြစ်မှာ ငါဘာမှဂရုစိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး ” ဆိုပြီး ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
လူတိုငျးနီးပါးမှာလူမသိစခေငျြတဲ့အကွောငျးအရာတဈခြို့ရှိနစေမွဲပါ။ ကိုယျပေါငျ ကိုယျလှနျ ထောငျးမယျ့အဖွဈမြိုးတော့ ဘယျသူမှမဖွဈခငျြကွပါဘူး။ ဇာဇာထကျမှာလညျး သူမရဲ့ အတှ ငျးေ ရး ကိ စ်စတဈခြို့ကို ပရိသတျတှကေိုသိသငျ့သလောကျ သိခှငျ့ပေးထားခဲ့ပွီး ထိနျခနျြ ထားတာတှရှေိကွောငျးလညျးဝနျခံထားပါတယျ။ ဒါကိုမှ စညျးမရှိဘဲ အတငျး စပျစုနေ သူ တှေ ကွောငျ့ စိတျ ရှုပျခဲ့ ရပါတယျ။
ဒီအကွောငျးကို ” I don’t like curiosity ok? ကိုယျခငျြး စာဖို့ထကျ နောကျထပျစပျစုခငျြသူမြားလဲ ကြှနျမရေးတဲ့ ဒီစာလေးကိုမွငျကွ ပါစေ Social ကပြွီး အရမျး atti t ude ဖွဈတဲ့သူ တှကေလဲနျော ကြှနျမ အတှငျးရေး စပျစုတာ ကြှနျမဖုနျးကို မနျနဂြောက မဇာ personalမို့ မသိပါဘူးခငျဗြာလို့ ဖွတောကို သူ့သူငယျခငျြးပါ တရားစှဲတာ ဘယျသူ လဲ သိခငျြလို့ သူ့ကိုလှ မျးမေးတာပါပွောပွီး မနျနဂြောကိုတောငျ စိတျဆိုးသှားလသေတဲ့ကှယျ ပွီးတော့ကြှနျမကိုပါ ဖစေ့ဘှတျကပါ သူတို့ တှကေအနျဖရ နျ့လုပျသှားတာကိုယျ ကသိ တော ငျမ သိဘူး ”
ကိုယျ့မနျနဂြောပွောမှကိုယျသူတို့နာမညျတှရေိုကျရှာကွညျ့တော့ဖရနျ့ မဟုတျတော့ဘူး ရယျရတယျ educated ဖွဈပွီး social ကတြဲ့သူမြိုးဆို ပိုတောငျ ethic ရှိရမှာမဟု တျ ဘူးလား? စိတျ ဆိုးရုံမကလို့လဲပါသသေေ ဒါမြိုးမိတျဆှေ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျး ကြှနျမ မလှမျးပါဘူးရှငျ့ ကြှနျမ မနျနဂြောခနျ့ထားတာ ရှငျတို့အားတိုငျး ဖုနျးချေါစပျစုဖို့ထားတာ မဟု တျ ဘူး အလု ပျအတှကျသီးသနျ့ ထားထားတာ ပအို့ဝျးမနျော သဘောကောငျးတယျနျော စိတျဆိုးအောငျလာမလုပျကွနဲ့ နာမညျတှရှေတျပွီး Live လှငျ့ဒဲ့ပွောပွဈမှာ ငါဘာမှ ဂရုစိုကျတတျတာမဟုတျဘူး ” ဆိုပွီး ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
Previous post ဘရာ မဝတ် ပဲ ရင်သားလေး ကိုင်ပြီး ပီဇာစားဦးမလား လို့ မေးလာ တဲ့ Xmue Xmue
Next post မုံရွာ က နာမည်ကြီးသူဌေး နဲ့ မော်ဒ ယ်မလေး တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး